Wacaal darey ah: Dhaq dhaqaaq ciidan oo saaka laga dareemayo Tukaraq – Radio Daljir
Noofember 6, 2018 7:36 b 0
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa sheegaya in saaka halkaasi ay ka jirto dhiilo colaadeed oo u dhexaysa maamulada Puntland iyo Soomaaliland .
Wararka ay helayso idaacada Daljir ayaa waxa ay sheegayaan in labada dhinacba saaka ay isku hub uruursanayaan si midba midka kale uu isga difaaco .
Jamhada uu hogaamiyo korneel Caare iyo ciidamo ka tirsan maamulka Soomaaliland ayaa shlay ku dagaalamay deegaano hoos yimaada gobolka Sool, dagaalkaas oo ilaa iyo haatan aan la ogayn khasaarihii ka dhashay .
Dhaq dhaqaaqan ka soo cusboonaaday deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa ku soo beegmaya xili Puntland ay ku jiro ololihii doorashada ,taas oo muujinaysa in Soomalailand ay doonayso in ay ka faaiidaysato marxalada kala guurka ah oo ay Puntland kujirto.
Soomaaliland iyo Puntland ayaa Tukaraq isku hor fadhiya mudo ku siman sagaal bilood , maalin ka hor ayay ahayd marii uu ergayga gaarka ah e Qaramada midoobay Soomaaliya uqaabilsan uu kala hadlaya xaalada Tukaraq madaxweyne Muuse Biixi .
Maxaa ka soo baxay kulan Sannadeedkii Golaha Wasiirrada ee Soomaaliya ? Akhriso